30 Cowboy Bebop Quotes Iji Mee Ka Back laghachi na 90 - Ndị Ọzọ
30 Nke kachasị mma sitere na Cowboy Bebop nke ga-eme ka ị laghachi na 90's
Isi iyi onyonyo egosipụtara: Akwụkwọ ahụaja UP
Ehi na ehi Bebop bụ anime setịpụrụ na afọ 2071, nke bụ ihe nju anya n'ihi na ụlọ akwụkwọ ochie a bụ kpochapụwo tupu oge ya.
Oghere oghere pụrụ iche na isiokwu pụrụ iche ga-eme ka ị chee na ọkwa miri emi, ma meghee uche gị na echiche ọhụrụ dị ka oge ọ bụla ọzọ nke oge ya.
kacha mma ntochi iberi nke ndụ Anime
Nke a bụ ụfọdụ n'ime ederede kachasị mma Nwa ehi Bebop nwere na-enye.
Ego Cboboy Bebop Kachasị Echeta Okwu:
# 1 - Faye Valentine kwuru
'Told gwara m otu oge ka m chefuo ihe gara aga, kpatara na ọ dịghị mkpa, mana ọ bụ gị ka na-ekegide n'oge gara aga, Spike.' - Faye Valentine
“Apụghị m ịrapara n’otu ebe ruo ogologo oge - ọ ga-egbu m. Ezinụlọ m dum dị ka nke ahụ. ” - Faye Valentine
“Know maara iwu mbụ na ọgụ? gbaa ha tupu ha agbaa gi. ” - Faye Valentine
“Oge gara aga bụ oge gara aga na ọdịnihu ga-abụ ọdịnihu. Nwoke bu nwoke na nwanyi bu nwanyi. Ugbu a bụ nke dị ugbu a. Abụ m onye m bụ na ị bụ onye ị bụ. Nke ahụ bụ ihe niile dị na ya. Ọ nwere ihe o mere? Ka ànyị chere na ọ dị mkpa? ” - Faye Valentine
“Surlanahụ ndị kasị dị ike bụ iwu nke okike. Anyị na-aghọgbu ma ọ bụ na-aghọgbu anyị. Yabụ, anyị na-eto ma ọ bụ na-ala n'iyi. Ọ dịghị ihe ọma mere m mgbe m tụkwasịrị ndị ọzọ obi. Nke ahụ bụ ihe mmụta. ” - Faye Valentine
“Ha na-ekwukarị na ụmụ mmadụ agaghị ebi naanị ha. Ma i nwere ike ibi ezigbo ogologo site naanị gị. Kama inwe mmetụta na ị nọ naanị gị, ọ ka mma ịnọ naanị gị. ' - Faye Valentine
# 2 - Okwu London
“Mkpụrụ obi Chineke nyere anyị, mmụọ anyị. Mmụọ anyị, bụ nke chọtara ụzọ anyị ga-esi na-egwu mmiri site na nnukwu netwọkụ ma biri na njedebe nke oghere. Ọ bụ na ahụ́ mmadụ abụghị nanị mkpokoro? Formdị ịdị adị nke pere mpe ma bụrụ nke na-esichaghị ike nke na ị gaghị amata ihe nke ọma. ” - Londes
# 3 - Vincent Volaju kwuru
“Enweghị m egwu ọnwụ. Ọ pụtara naanị ịrọ nrọ nkịtị. Nrọ nke diri rue mb fore ebighi-ebi. - Vincent Volaju
N'ime ụbọchị ndị m biri, ọ bụ nanị ndị mụ na ha biri yiri ka ha bụ ezigbo ya. ” - Vincent Volaju
“Onweghi onye puru ido uzo doro anya nke ezi uche na nzuzu. Na-akwagharị ahịrị ahụ dịka ị hụrụ na ọ dabara adaba maka onwe gị. Ọ dịghị onye ọzọ nwere ike. Ga-aghọta n'oge na-adịghị anya… na onye ara bụ ụwa a. ' - Vincent Volaju
“Mara ọtụtụ ihe banyere pọgatrị? Ọ bụ ebe dị n’agbata eluigwe na hel, ebe ndị a hapụrụ, ndị na-enweghị ike ịbanye n’eluigwe na-aga n’ihu ịta ahụhụ, ebe mgba na ihe mgbu. N'aka ozo, uwa nke anyi no n'ime ya ugbua. ' - Vincent Volaju
# 4 - Jet Black kwuru
“Ọ dị nnọọ ka Charlie kwuru na nrọ m. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịnata ị ga-enye. Lee Spike, ị gere ntị na nrọ gị, nke ahụ bụ otu ị ga-esi chọta nwa agbọghọ ịchọrọ. ' - Jet Black
E kere ụmụ mmadụ ịrụ ọrụ na ọsụsọ maka ego ha. Ndị ahụ na-anwa ịba ọgaranya ngwa ngwa ma ọ bụ bie ndụ nke ndị ọzọ - ha niile na-enweta ụgwọ ọrụ Chineke n'ụzọ. Nke ahụ bụ ihe mmụta. Ma, otu ihe banyere ụmụ mmadụ bụ na ha na-echefu ihe ha mụtara ngwa ngwa. ” - Jet Black
Menmụ nwoke na-echekarị gbasara ihe ndị mere ha tupu ha anwụọ, ka à ga-asị na ha na-achọ ihe ga-egosi na ha biri ndụ. ” - Jet Black
“You nọ m mgbe niile, nke ahụ bụ ihe m chọrọ. Naanị gị. Maka ihe ụfọdụ, enweghị m obi ilu ma ọ bụ gbajie agbaji, ọ dị ka ọ bụ ezigbo. Ma nwayọ nwayọ achọpụtara m na ọ dị adị - na ị pụọla. Nke nta nke nta, ọ dị m ka ihe ọ bụla n'ime m ọ tụrụ m n'anya. ” - Jet Black
“Ihe niile nwere mbido na njedebe. Ndụ bụ usoro okirikiri nke mmalite na nkwụsị. E nwere njedebe anyị achọghị, mana ha agaghị ekwe omume. Anyị ga-eche ha ihu. Ọ bụ ihe mmadụ ịbụ ihe gbasara ya. ' - Jet Black
“Oge mbụ mụ na gị hụrụ, ị gwara m ihe. I kwuru na ị nwụrụ otu oge, na ị hụla ọnwụ. Gịnị mere na ị gaghị ahapụ ya ka ọ laa? Chefuo ihe gara aga. ” - Jet Black
# 5 - Egwu Spiegel kwuru
“Lee anya m n’anya, Faye. Otu n’ime ha bụ adịgboroja n’ihi na m tụfuru ya n’ihe ọghọm. Kemgbe ahụ, ana m ahụ n'oge gara aga na otu anya na nke ugbu a na nke ọzọ. Yabụ, echere m na m ga - ahụ ihe n'eziokwu, ọ bụghị foto niile. Ọ dị m ka m na-ele nrọ m na-enweghị ike iteta. Tupu mụ amara ihe na-eme, nrọ ahụ agwụla. ” - Spike Spiegel
“Adị m obere mgbe ahụ, anaghị m atụ egwu ihe ọ bụla, echeghị m ịnwụ maka oge nke abụọ. Echere m na m bụ anwụ anwụ. Mgbe ahụ, ezutere m otu nwa agbọghọ. Achọrọ m ịdị ndụ, amalitere m iche echiche otú ahụ; na nke mbụ ya, egwu ọnwụ tụrụ m. Enwetụbeghị m ụdị obi ahụ mbụ. ” - Spike Spiegel
“Mmụọ ozi dara ada nke a chụpụrụ n’eluigwe, na-ebili n’ìhè iji nweta obiọma Chineke.” - Nwa ehi
Ahụrụ m nwanyị n'anya nke nwere ike ịnya ịnyịnya ibu m. ' - Spike Spiegel
“N’otu oge, ọ dị otu nnụnụ tigoro nke tara akpụ. Pusi a, nwuru nde mmadu nwuru, ndu ozo biri ndu nde. O nwekwara ndị nwe ya dị iche iche na ọ chọghị ịma, cat anaghị atụ egwu ịnwụ. Otu ụbọchị, ọ hụrụ otu nwamba ọcha nwaanyị, ha abụọ hụrụ onwe ha n’anya ma biri n’obi ụtọ. Ọfọn, afọ ndị gafere na nwamba nwamba ọcha mere agadi ma nwụọ. Nnụnụ Tiger tara ahụ tiri otu nde ugboro, mgbe ahụ ọ nwụkwara. Ma na nke ugbu a he .. ọ laghachighị. ” - Spike Spiegel
Anime kachasị na-egosi oge niile
“E nwere ihe atọ kacha kpọọ m asị: Kidsmụaka, anụ ụlọ, na ụmụ nwanyị nwere agwa. Gwa m, gịnị kpatara anyị niile ji etinye anyị n'ụgbọ anyị? ” - Spike Spiegel
'Don’tchọghị ka gị na gị nọrọ ma soro laa ndụ gị n'iyi?' - Spike Spiegel
“Agaghị m aga ebe ahụ ịnwụ. Ana m aga ebe ahụ ịchọpụta ma m dị ndụ n'ezie. ' - Spike Spiegel
# 6 - ọchị ọchị ehi
“Atụla egwu Ọnwụ. Ọnwụ na-adị anyị n'akụkụ mgbe niile. Mgbe anyị gosiri ụjọ, ọ na-awụli anyị elu karịa ọkụ. Ma, ọ bụrụ na anyị egosighi ụjọ, ọ na-ele anyị anya nwayọ ma na-eduru anyị gaa na njedebe. - Na-achị ọchị Bull
# 7 - Okwu ojoo
“Ndị mmụọ ozi ahụ a chụpụrụ n'eluigwe enweghị ihe ọzọ ha ga-eme ma ọ́ bụghị ịghọ ndị mmụọ ọjọọ.” - Obi ojoo
'Ọ dịghị ihe ọ bụla fọdụụrụ ikwere na ya.' - Obi ojoo
# 8 - Andy si De Oniyate kwuru
'Gịnị mere anyị anaghị a toụ m na ngosipụta m n'anya gị n'anya?' - Andy Von De Oniyate
# 9 - Gren kwuru
'I kwuru na ịchọghị ndị enyi gị, mana enwere m mmasị n'okwu ahụ… ruo na anya mmiri.' - Gren
Nwere aro maka ọbịbịa na-abịanụ? Kekọrịta ya na nkwupụta.
Anime Quotes Mmetụta Na-ekwu Banyere Andhụnanya na Mmekọrịta
Anime na-egosi ikiri na bekee nke akpọrọ
Anime kachasị elu 50 oge niile